December 2011 ~ Rohingya Blogger
Written by: IPCSBy Panchali Saikia
The Rohingya refugee crisis is notanew phenomenon, and it has now grabbed the attention of the international media for all the wrong reasons. The Rohingyas, in large numbers, are now trying to escape to Malaysia via the sea route through Thailand, but are being denied entry by Thai authorities and forcibly pushed back. Earlier this year around 91 persons believed to be Rohingyas were rescued near Andaman Island by the Indian Navy and around 129 by the Indonesian Navy in Aceh. The Rohingyas have been sheltered by Bangladesh for nearly three decades. What is the reason for their escape to Malaysia? Why is Thailand forcibly pushing them back to sea? Thailand has provided shelter to hundreds and thousands of other displaced people from Myanmar, why is then expelling the Rohingyas?Why Are The Rohingyas Escaping To Malaysia?
However, after providing shelter to the Rohingyas for nearly three decades, Bangladesh is now concerned about the annual increase in their numbers. Apart from being an economic burden, the Rohingyas’ involvement in insurgent activities along the Myanmar-Bangladesh border is feared by the government. Hence to reduce the influx, the government has declared that it will no more consider any asylum seeker as refugee. Also, it has now denied permits for aid agencies to assist unregistered refugees. Anti-Rohingya communities in Bangladesh have also pressurized the government to repatriate the Rohingyas. Due to the denial of protection, assistance, and fear of repatriation, the Rohingyas are now escaping to Malaysia through the sea route. Malaysia is seen as the best destination because of the religion factor. Also, the Malaysian government’s permit to access the UN Refugee Agency (UNHCR) has attracted asylum seekers.Rohingyas: A Threat To And Burden For Thailand
The Thai authorities are apprehensive of the influx and suspect that the Rohingyas are assisting the Muslim-led insurgency in southern Thailand, which has intensified in recent times. Furthermore, nearly 1 million other migrants from Bangladesh and Myanmar are estimated to already be in Thailand. The exceeding numbers of illegal migrants will add to the economic burden and poseathreat to Thai national security. Unlike the other migrants in Thailand who playamajor role contributing to the Thai economy (http://bit.ly/vl6ylg), the Rohingyas are onlyaliability and burden; they cannot getawork permit in Thailand as this requiresanationality verification certificate which the Rohingyas do not have.Myanmar’s Denial Of Citizenship To Rohingyas
Panchali SaikiaResearch Officer, IPCSemail: panchali@ipcs.org
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အနုပညာရှင်များလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ၁၂၅သိန်းတန် တီရှပ်
ရန်ပုံငွေပွဲမှာ အဆိုတော်အားလုံး လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ၁၂၅ သိန်းတန် တီရှပ်
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အင်္ကျီကို လေလံပစ်ရာ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ကျပ် ၁၂၅ သိန်းဖြင့် ဈေးအမြင့်ဆုံးပေး၍ ၀ယ်ယူသွားသည်။
ရန်ပုံငွေပွဲအမှတ်တရအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မျက်နှာဓာတ်ပုံဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော အနီရောင်တီရှပ်(XL size)တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များက လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အင်္ကျီကို ကြမ်းခင်းဈေး ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ည ၈ နာရီကျော်တွင် စတင်လေလံပစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ ၆ ခုက အပြိုင်လေလံဆွဲကြကာ ည ၁၂ နာရီကျော်တွင် Common Purpose ကုမ္ပဏီမှ MD ဒေါ်မာလာဝင်းက ကျပ် ၁၂၅ သိန်းဖြင့် ဈေးအမြင့်ဆုံးပေး၍ ၀ယ်ယူသွားခြင်းဖြစ်သည်။
“အန်တီစုက ပြည်သူလုအတွက် လုပ်ပေးနေတာ။ အဲဒီအတွက် လှူချင်နေတာ။ အခုလှူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ” ဟု ဒေါ်မာလာဝင်းက ပြောသည်။
သူမအား အင်္ကျီပေးအပ်ပွဲကို ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် NLD ရုံးချုပ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုလေလံပွဲကို အဓိကစီစဉ်သူ ဦးမောင်မောင်အေးက 7Day News သို့ပြောသည်။
ကျွန်မ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ကဗ္ဘာကျော် Beatles အဖွဲ့ရဲ့ ရှိုးတစ်ခုကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ နှစ် ၄၀ကျော်ပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံး ဒီလို ဂီတရှိုး ပွဲတော်တစ်ခုကို ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ်လေးဆယ်ကျော်ပြီးတော့စောင့်ခဲ့ရတာ စောင့်ရကျိုးနပ်ပါ...တယ်။ ကျွန်မပြော ချင်တာက တစ်ချို့အရာတွေက ဘယ်လောက်ကြာကြာပဲစောင့်ရစောင့်ရ စောင့်ရ ကျိုးနပ်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ( တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နှုတ်ဆက် စကားပြောကြားခြင်းမှ ) by ဒီမို ဖက်တီး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးရန်ပုံငွေ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မင်းဓမ္မကုန်းမှာရှိတဲ့ MCC ဝင်းအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ ပရိသတ်တွေ အများအပြား လာရောက် အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တက်ရောက်အားပေးသူ လူဦးရေ ၂သိန်းကျော် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲသမိုင်းမှာ မကြုံစဘူး အအောင်မြင်ဆုံး၊ အစည်ကားဆုံး ရံပုံငွေ ဖျော်ဖြေရေး ဂီတပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်...။ ဒေါ်အောင်စုကြည် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘဝမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ ဘီတဲလ် တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲပြီးရင် အနှစ်လေးဆယ်ကျော်အတွင်း ပထမဦးဆုံး ပြန်လည်တက်ရောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂီတပွဲတော်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်....။
credit : demowaiyan & dawnmanhon
Myanmar sets by-election date ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဧပြီ ၁ ရက် ကျင်းပမည်
By Hla Hla Htay (AFP) YANGON, Myanmar — Myanmar is to hold by-elections on April 1,agovernment official said Friday, which could propel democracy icon Aung San Suu Kyi into the army-dominated parliament.
"The by-election will be held on April 1,"aMyanmar government official who asked not to be named told AFP.
Suu Kyi, who officially registered her opposition partyaweek ago, has already said she intends to stand in the polls.
Suu Kyi, 66, has spent much of the past two decades in detention and was released from house arrestafew days afteracontroversial November 2010 general election.
The upcoming vote will offer her an opportunity to seekaseat inaparliament that remains dominated by allies of the former military junta.
Those who wish to take part will need to register between January 16 and 31, said the Myanmar official, who added that an announcement would be made by the Union Election Commission.
A total of 48 seats are expected to be up for grabs, although this would not be enough to threaten the resounding majority held by the ruling military-backed party.
The NLD was stripped of its status asalegal political party by the junta last year after it chose to boycott the 2010 poll.
Suu Kyi's party refused to take part in last year's poll -- the first in two decades -- mainly because of rules that would have forced it to expel imprisoned members.
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို လာမယ့် ၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှာ ပြုလုပ်မှာ​ဖြစ်​ပြီး​နေပြည်တော်ကော်မရှင်က ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်ရုံးတွေထံ စာပို့ အကြောင်းကြားလိုက်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်လူကြီး တဦးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာဟာ ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် by ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသည့် အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းပညာရှင် စာရေးဆရာ ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးကို မြန်မာတိုင်း(မ်) အကြီးတန်းလက်ထောက်စာတည်း စန္ဒာလွင်က အီးမေး(လ်)မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းထားပါသည်။
ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦး သည် သမိုင်းပညာရှင် စာရေး ဆရာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကိန်း ဘရစ်ဂ်ျတက္ကသိုလ် ထရီနီတီ ကောလိပ်၏ င်္နူသတ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ကာ ဟားဗတ်၊ ကိန်း ဘရစ်ဂ်ျ စသည့် ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ်များစွာတွင် သင် တန်းများ ပို့ချခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ မြေး ဖြစ်ကာ ကုလငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ် သုံးခုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံရေးဌာန၊ မူဝါဒစီစဉ်ရေးဌာန အကြီးအကဲအဖြစ်လည်း တာဝန်ယူခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာမိဘများက မွေးဖွားခဲ့သည့် ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးသည် နယူရော့ခ်တိုင်း(မ်)နှင့် တိုင်း(မ်)ကဲ့သို့ ကမ္ဘာကျော် စာစောင်များ တွင် Thant Myint-U အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့ပြီး သူ၏လက်ရာစာအုပ်များတွင် The Making of Modern Burma ၊ The River of Lost Footsteps နှင့် Where China Meets India: Burma and the New Crossroads of Asia စာအုပ်များ ပါဝင်သည်။
* အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ် တစ်ခုကိုတော့ ဖြတ်သန်းနေပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်ကနေ ပေါ်လာမယ့်ရလဒ်ကိုတော့ ပီပီပြင်ပြင် ပုံဖော်ကြည့်လို့ မရသေးသလိုပါပဲ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကို စရောက်ပြီလို့ ဆရာယူဆပါသလား။
ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်တော် အကောင်းမြင်ထားချင်ပါတယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ခေတ်ဟောင်းကတော့ ကျန်ခဲ့ပြီလို့လည်း ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပြောတာဟာ ရှေ့လျှောက် လွယ်လင့် တကူပဲလို့တော့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေဟာ သိပ်ကို အမြောက်အမြားပဲ။ နိုင်ငံရေးမှာရော၊ စီးပွား ရေးမှာရော။ သမ္မတကြီးဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ကျဖို့ အားလုံးဦး တည်ပြီး လိုအပ်တဲ့ စီးပွား ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကနေ ဒီ ဦးတည် ချက် အကောင်အထည်ပေါ်လာ ဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်အထည်မြင်ရဖို့ အနည်းဆုံး နှစ်တိုကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်လာဖို့ အလွန့်အလွန်ကို ခက်ခဲ ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် အကောင်းကို မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေ့ လမ်းခရီး အလွန်ခက်ခဲ မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ကြည့်ထားဖို့လိုမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်ဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အတော်မကြုံစဖူး ဖြစ်တဲ့ကာလမှာ ပေါ်ပေါက်နေတယ် ဆိုတာလည်း သတိရဖို့လိုတယ်။ ဥပမာ ရှေ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်မှာ ဥရောပမှာ အတန်အသင့် စီးပွားကျတဲ့ကာလနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြုံရနိုင်တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ချီ ပိုပြင်းထန်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒီအချက်က မြန်မာအပေါ် အလွန်ဆိုးရွားစွာ ရိုက်ခတ်နိုင်တယ်။ နိုင်ငံတွင်းအခြေအနေကို ကြည့်ရင်လည်း ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ ရသ လောက် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားနေတုန်း၊ နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့ နေတုန်း၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးစနစ် နှစ်ခု စလုံး တစ်ပြိုင်နက် ကူးပြောင်းမှု စတင်တာ ဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ မရရအောင် ကျော်လွှားရမယ့် အဂတိလိုက်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှု အကြီးကြီးတွေ ရှိနေတယ်။ အခု ထက်ထိ ရင်ဆိုင် နေရဆဲ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ လုပ်ရဦးမယ်။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ရှိနေလို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အခုထက်ပို ဖွံ့ဖြိုး မလာနိုင်ဘူး။ ငွေကြေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး မူဝါဒတွေ ပါဝင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မက်ခရိုစီးပွားရေး မူဝါဒတွေ နည်းလမ်း တကျဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ရာ လည်း လိုအပ်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဥပဒေအဖွဲ့အစည်း၊ လူအဖွဲ့အစည်း(Institutions) တွေ မရှိဘူး။ အဲဒီ အတွက် စိတ်လည်း မကောင်းဘူး။။အခြေခံ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း တွေ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာ ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဥပဒေ နဲ့ တရားစီရင်ရေးနယ်က ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်း လာအောင် လုပ်ရမယ်။ အဲဒီ Institution change ကို လုပ်ရတာ အထူးသဖြင့်ကို အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထပ်ပြောရရင် သမ္မတဟာ ဒီကိစ္စတွေကို လမ်းမှန်ကမ်း မှန်အတိုင်း ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ သန္နိဋ္ဌာန် ချထားတယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည် ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပထမဦးဆုံး လိုအပ်တာက အောင်မြင် ဖို့ဆိုတဲ့ စိတ်ပဲလေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လူတိုင်း နီးပါးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံကို အောင်မြင်စေချင်တယ်၊ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်မနေစေချင်ကြတော့ဘူးလို့လည်း ကျွန်တော် သဘောရထားတယ်။ ခြုံပြောရင် အနာဂတ်မှာ နှောင့် နှေးစေမယ့် အခက်အခဲတွေရော၊ အံ့အားတသင့် ဖြစ်ရတာတွေရော သေချာပေါက် ရှိပါလိမ့်မယ်။ အပေါ် စီးက လွှမ်းခြုံကြည့်လို့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေ တိုင်းသူပြည်သား လူတစ်ဦးချင်းစီဟာ အပြောင်း အလဲကြီးတွေကို ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ ကံတရားကလည်း အပြောင်း အလဲကြီးတွေကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာဟာ ကံကောင်းလိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။
* အစိုးရက စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဦးစားပေးအဖြစ် ရည်ရွယ်ထား ပြီး ပြည်ပလုပ်ငန်းတွေကလည်း လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ကြည့်နေကြပြီ။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ စဉ်းစားကြတာလည်းရှိတဲ့အတွက် ဆရာ့ အနေနဲ့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုမျိုးရတာကို မြင်ချင်ပါသလဲ။
နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးကတော့ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးခြင်း လျော့ကျဖို့ ဖြစ်ရမှာပဲ။ အရေအတွက် သန်းဆယ်ချီတဲ့ သိပ်ဆင်းရဲနေသူတွေဟာ မသေရုံတမယ်ပဲ ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျန်းမာရေးကိစ္စပေါ်ရင် ဆေးကုစရာမရှိဘူး။ သားသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကျောင်းကို တစ်နှစ် နှစ်နှစ်ပဲ တက်ကြတယ်။ စားစရာ လုံလောက်တယ်ဆိုဦး ကလေးတွေ အတွက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရပြည့် အစားအ သောက် တွေ မဟုတ်ဘူး။ အကြွေးပိနေသူ သန်းချီရှိနေတယ်။ နောက်ထပ်လူသန်းပေါင်းများစွာလည်း နိုင်ငံကနေထွက်ပြီး ပြည်ပမှာ အလုပ် ရှာကြရတယ်။ တစ်ခေါက်သွားရင် နှစ် အတော်ကြာ မိသားစုနဲ့ဝေးနေရတယ်။ ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံးမြင်ချင်တာက နိုင်ငံမှာ ဒီ လူဆင်းရဲတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့်၊ နောက် ကျေးလက်ဆိုင်ရာ သက်မွေးလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ အစားအသောက်ဖူလုံရေး အပိုင်းကို တိုးတက်စေမယ့် လက်တွေ့နဲ့ ကိုက်ပြီး အခြေခိုင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုပဲ။ ကုန် ဈေးနှုန်းကို ကြီးမလာစေဘဲ တစ်ချိန်တည်းမှာ မြို့ကြီးတွေမှာ အလုပ်အကိုင်တွေ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးဖို့လိုတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ခရို စီးပွားရေးမူဝါဒတွေ လမ်း မှန်ကျဖို့လို့ အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာပဲ။ နိုင်ငံမှာ ပုံဖော်မယ့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် စံပုံစံတစ်ခုခုကို သတ်သတ် မှတ်မှတ် ရွေးဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မထင်ဘူး။ တရုတ်ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖိန် ပြောသလို ကျောက်တုံးကို စမ်းရင်းနင်းရင်းနဲ့ (ချောင်း တစ်ခုကို ဖြတ်သည့်အခါ အောက်ခြေမြေပြင်ကို ခြေဖြင့် စမ်းကာစမ်းကာ ခြေကုတ်မြဲစေ လျက်ကူးသကဲ့သို့) မြစ်ကိုကူးသွားရမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်လုပ်တဲ့ အခါ ကြုံလာရမယ့် ညှိနှိုင်းစရာအခြေ အနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိမြင်နှံ့စပ်ပြီး ပွင့်လင်းမှုရှိရှိ အခြေ အတင် ငြင်းခုန် ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ (အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲများ) လိုတယ်။ ဥပမာ ပမာဏကြီးလာနေတဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုရင် နိုင်ငံမှာကောင်းကျိုးရနိုင် သလို ဆိုးကျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကို အလုပ်အကိုင်တွေလည်း ပေါ်ပေါက်စေ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မထိခိုက်စေ၊ တခြားဖြစ်လာနိုင်တဲ့ များစွာသော ဆိုးကျိုးဆက်တွေလည်း ပါမလာစေအောင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ကျွန်တော်တို့ စစဉ်းစားကြဖို့လိုပြီ။
* နိုင်ငံမှာ မဖွံ့ဖြိုးဘဲ တခြားဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုပဲမျှော်ရင်း အနေကြာ လာတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက လူတချို့ အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှုအလားအလာအပေါ် မယုံမရဲ ဖြစ်နေနိုင်မလား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မက်ခရိုစီးပွားရေး မူဝါဒတွေနဲ့ ဘတ်ဂျက်ဦးစားပေးသုံးစွဲမှု ကဏ္ဍတွေကို မှန်ကန်အောင် ပြုနိုင်စွမ်းရင်၊ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အစီအစဉ်တွေကို လမ်းကျအောင် အစီအစဉ်ချနိုင်စွမ်းရင်၊ ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းလာရေး ရေရှည်လမ်းကြောင်းပေါ်ကို အနည်းဆုံး ခြေစချနိုင်စွမ်းပြီဆိုရင်၊ အဲလို ဆိုရင် ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ စစ်မှန်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲကောင်းတွေကို နှစ်နှစ် သုံးနှစ် အတိုင်းအတာအတွင်း ကျွန်တော်တို့ စမြင်နိုင်မှာပါ။ အလားအလာ ကတော့ ဧရာမကြီးပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ မပျက်စီးသေးဘူး။ လူဦးရေ မတန်တဆများတဲ့ပြဿနာ မရှိသေး ဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြား အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာဘေးတစ်လျှောက် အံ့ဩစရာ ကောင်းလောက်အောင် ကောင်းတဲ့ ပထ၀ီ တည်နေရာ ရှိတယ်။ သူများနိုင်ငံ တွေနောက် အများကြီး ကျန်နေရစ်တာ ကတော့ ဆိုးလှတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို ကျွန်တော် တို့ရဲ့ အားသာချက် တွေဖြစ်လာအောင် အသုံးချလို့ရတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေ လုပ်ခဲ့မိတဲ့ အမှားတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်တယ်။ အခု လက်ငင်းအချိန်ကာလမှာ အဲဒီ ဒေသတွင်း တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အမှား တွေအပေါ် လေ့လာသုံးသပ် သင်ခန်းစာ ထုတ်ယူနေမှုကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကြီး အဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသင့်တယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အကြာကြီး စိတ်ရှည်ပေးထားခဲ့ပြီးပြီ။ မြန်မာပြည် သူတွေဟာ ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော၊ သူတို့ ရဲ့ကလေးတွေအတွက်ရော ပိုကောင်း တဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို အချိန်မဆိုင်းဘဲ ခံစား ရဖို့ ထိုက် တန်နေသူတွေဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ယနေ့ကလေးငယ်တွေဟာ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေကို မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း 'အခု' ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက် ရွေ့လျားစေနိုင်စွမ်းရင် ဒီနေ့ သားသမီး အရွယ်တွေအတွက် အလားအလာတွေ ဟာ အဆုံးမရှိပါဘူး။
* ဒီအလားအလာတွေ ရှိသလောက် လက်တွေ့ခံစားကြရအောင် သာမန် ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ပါဝင်လုပ် ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ရော ပြောချင်တာရှိပါသလား။
မြန်မာဟာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကစ ဘဏ်လုပ်ငန်းအဆုံး၊ လူထုကျန်းမာ ရေးကစ နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာအဆုံး လက်တွေ့ နယ်ပယ်တိုင်းမှာ ပညာခန်း အထူးပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သူတွေ အသည်း အသန်ကို လိုအပ်တယ်။ အသိပညာရေးရာအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ တခြားဘယ်အရာမှ အများကြီးဖြစ်ထွန်း လာဖို့ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် သံသယ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရောက်ဖို့ လိုတဲ့အနေအထားကိုရဖို့ မျိုးဆက် တစ် ဆက်စာတော့ အချိန်ယူမှာပဲ။ လက်ရှိ အချိန်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုက အမျိုး မျိုးသော နယ်ပယ်များစွာမှာ အတွေ့အကြုံ၊ ပညာရေးပြည့်ဝသူ မရှိ ဖြစ်နေ တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနေအထားကို နှစ်တိုနဲ့ နှစ်လတ် အပိုင်းအခြားအတွင်း ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှာ တွေ့ရေးပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့ မှုတွေကို ကျွန်တော် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆန့်ကျင် ခဲ့တာ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ဟာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကျင့်တဲ့သုံးနိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုအထိ အတွေ့များဖို့ လိုအပ်နေချိန်မှာ ဒီပိတ်ဆို့ မှုဟာ မြန်မာကို လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေနဲ့ ကင်းကွာ အောင်ပဲ အဓိက ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြောင်းကျင့်သုံးလာအောင် လုပ်ဖို့၊ အဲလို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီဆိုရင်လည်း ဒီကူးပြောင်းမှု ရေရှည်ခံအောင်မြင် တည်တံ့အောင်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်တဲ့ ပညာခန်းနဲ့ အဖွဲ့ အစည်းရင်းမြစ်အခြေခံတွေရှိ နေစေရ အောင်၊ အသိပညာရေးရာအတွက် အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုလည်း သိပ် နည်းနေချိန်မှာ အဲဒီအသိပညာနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ရင်းမြစ်အခြေခံတွေကို တည်ဆောက်ထားဖို့ အဆောတလျင်ကို လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေခဲ့လို့ပဲ။ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတာက သင်ယူလေ့ကျင့်မှုတွေအတွက်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းရာပေါင်းများစွာအကူအညီ တွေ၊ နောက် ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ အသည်းအသန် လိုအပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုး အားကောင်းအောင် သုံးစွဲနိုင်ခဲ့မယ့် တခြား အကူအညီတွေ ကျွန်တော်တို့ မရခဲ့တာပဲ။ ပြီးတော့လည်း - ဒါကတော့ တခြား အဓိကကျတာတစ်ခုပါ - ဒီနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို တကယ် ကျင့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံ သားအားလုံး အသိပညာ သိမြင်နှံစပ်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း ဖြစ် တဲ့ကိစ္စရပ်တိုင်းကို ဆန်းစစ် ဝေဖန်စဉ်းစား နိုင်စွမ်း ရှိနေစေဖို့ လိုအပ်တယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားတွေဟာ အသိပညာ သိမြင် နှံစပ်ပြီး အရေးကိစ္စ တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ဂရုတစိုက် စဉ်းစားချင်စိတ် ရှိမှ၊ ပါတီတစ်ခု၊ ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်၊ အယူ ၀ါဒ တစ်ခုတည်းနောက် အသာလိုက် မသွားမှသာလျှင် ဒီမိုကရေစီစနစ်က အသက် ၀င်နိုင်တယ်။
* လက်ရှိ မွဲမွဲတေတေ အနေအထားကနေ တက်မလာနိုင်ခဲ့ရင် ရှေ့ကြုံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။
ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မလာစေဘဲ အလုပ်အကိုင်တွေ ပေါ်ပေါက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အရေးတကြီး လိုအပ်တယ်။ အဓိပ္ပာယ်က မှန်ကန်တဲ့ မက်ခရိုစီးပွားရေးရပ်ဝန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ငွေကြေး မူဝါဒတွေ ရဖို့ပဲ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ နည်းပညာတွေ ဆင့်ပွားရရှိစေမယ့် မက်လောက်တဲ့ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဖို့နဲ့ ကျွမ်း ကျင်မှုပြည့်ဝစွာ ကိုင်တွယ်ခန့်ခွဲထားတဲ့ ပြင်ပအကူအညီတွေရဖို့ပဲ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တယ်။ လွယ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေး ချို့တဲ့နေချိန်မှာ ဘယ်နိုင်ငံမှ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းမှုတွေ၊ ပဋိပက္ခ အလွန် ကူးပြောင်းမှုတွေ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။
* နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တချို့က တချို့ကို တရုတ် တပည့်ခံတယ်လို့ အပြစ်တင်တယ်။ တချို့ကလည်း အနောက် နိုင်ငံတွေ ကိုမျှော်နေတယ်လို့ ဝေဖန်တယ်။
မြန်မာဟာ နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ရမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ အလွန်အရေး ကြီးသလို အမေရိကန်နဲ့ ဂျပန်လို အဝေးက နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်း ဖို့လည်း အလားတူ အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရွေးပြီး ဆက်ဆံရေးလုပ်စရာ ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ စစ်အေးကာလတုန်းကတောင် မလုပ်ခဲ့တာ အခုချိန် ဒီနိုင်ငံ တွေအ ကုန်လုံး တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ အလွန်နီးကပ်စွာ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်စရာ ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဘာလိုအပ် သလဲဆိုတော့ ပါးနပ်ကျွမ်းကျင်ဖို့ လို တယ်။ နိုင်ငံအမျိုးမျိုး ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လိုအထောက် အကူပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ နားလည်ဖို့လိုတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်လို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လို အဖွဲ့ အစည်းအမျိုးမျိုးတွေဟာ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းက ဘယ်လိုအထောက်အကူပေး နိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့လိုတယ်။ လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာ တစ်ရပ် ရှိဖို့လိုပြီး ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေကို အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် အဲဒီမဟာဗျူဟာ အပေါ်မှာ အခြေခံဖို့ လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို မြန်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့ကျအောင်၊ ဖွံ့ဖြိုးအောင် အကောင်းဆုံး အထောက်အကူရစေမယ့် နည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးကို ကိုင်တွယ်ဖို့လိုတယ်။
* ဆရာတို့မိသားစု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေချဖို့ ရှိပါသလား။
ရှိပါတယ်။ ဘယ်တော့ဖြစ်မယ်တော့ မပြောတတ်သေးဘူး။ အခုလည်း ကျွန်တော် တစ်လတစ်လကို လ၀က်လောက်က မြန်မာ နိုင်ငံမှာပါပဲ။
မီးဘေးသင့် ပြည်သူများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်အားပေး
ဒီဇင်ဘာ(၃၀)ရက် နေ့လည်ပိုင်းက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မေတ္တာညွှန့်ဂိုဒေါင်မီးလောင်မှု့ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားသည့် ဒုက္ခသည်များအား တစ်နာရီဝန်းကျင် ခန့် အားပေးစကားပြောခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မေတ္တာညွှန့် ဂိုဒေါင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု့ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားသော ဒုက္ခသည်ပေါင်း (၈၀၀) ကျော်ကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဒီဇင်ဘာ(၃၀)ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၁း၃၀) နာရီမှ (၁၂း၃၀)၀န်းကျင်အထိ အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ အား လိုအပ်သည်များကို အကူညီပေးရန်အတွက် ထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေ အဓိကလိုအပ်ပါလဲ၊သူတို့တွေကို အခြား ဘယ်နေရာ မှာ ထားပါသေးလဲ၊ လိုအပ်သည်များကို တပည့်တော်လှူချင်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း ဆရာတော်ထံမှ သိရှိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဆိုပါကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ NLD ဒု-ဥက္ကဠ ဦးတင်ဦးနှင့်အတူ အခြား NLD အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“သူတို့တွေအတွက် အဓိက လိုအပ်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါတွေ ဖြစ်တယ်၊ ရာသီဥတုက အေးတော့ စောင်တွေလည်း လိုပါတယ်၊ သူတို့တွေကို နောက်အဆောင်တစ်ခုမှာ နေရာချထား ပေးပြီးပြီ၊ တချို့ ကတော့ အမှတ်(၇) ကျောင်းမှာ ရှိပါသေးတယ်” ဟု ပုသိမ်ညွှန့် ရာကျော် ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်မှ ဆက်လက် မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဒုက္ခသည်များအား ၂၉ရက်နေ့က ပုသိမ်ညွှန့် ရာကျော်ကျောင်းတိုက်တွင် ဒုက္ခသည်စခန်း ဖွင့်လှစ်ကာ ကူညီမှု့များပေးခဲ့သလို ကျောင်းမဆန့်သဖြင့် အချို့တစ်ဝက်အား အမှတ်(၇)အထကကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးရကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
“ခုလိုတွေ မြင်ရတာ အန်တီ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ မင်းတို့တွေ အားတင်းထားကြပါ၊လိုအပ်တာမှန်သမျှ ကူညီပေးမှာပါ”ဟု ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အသက်(၃၀)၀န်းကျင်ရှိ ဒုက္ခသည်တစ်ဦးကပြောသည်။
`ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ အန်တီကိုတွေ့လိုက်ရတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အားဆေးးပါပဲ၊ အခုလို လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် အန်တီကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်”ဟု ဒုက္ခသည်တဦးမှ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံမှုတွင် သတင်းမီဒီယာများနှင့် ပြည်သူလူထု (၁၀၀)ကျော်က ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
Credit -Shwe Myitmakha Media Group , Voice
credit here Read More
“The order was dispatched to village administration offices by U Aung Myint Soe, the district administration officer and U Kyi San, township administration officer.”
“Some of the village administration officers from Burma border security force (Nasaka) area number6were ordered to their villages not to use the loudspeakers while prayer calling (Azan) in the Mosques.”
U Than Htun,the village administration officer, Shwezar village had ordered not to use loudspeakers while prayer calling in the Mosques on December 27, according to an elder from the village.
“The massage was again called by Captain Hay Win Min Htun, the officer in charge of camp 14 under Nasaka area6while the Nasaka called meeting with village’s elders and villager administration officer on December 27.”
“We stopped to call with loudspeakers for prayer calling in the Mosques after the meeting in the Shwezar village tract.”
“It is the new civilian government styles for moving the discipline democracy which the head of the state U Thein Sein stated that freedoms of religious are available in the country, but the authorities are going to stop some systems of religious other than Buddhist in northern Arakan where Rohingya community who believed Islam are resided.”
The ruling party – Union Solidarity and Development Party (USDP) –promised and ensured the Rohingya community that will remove restriction on marriage, education, movement, building worships places when the party came to campaign for election 2010 in northern Arakan. But, the promised and ensured which given in the election were disappeared and more imposed restriction on Rohingya again. “Burma persecutes the Rohingya, the minority Muslim group of northern Arakan, denying them citizenship and harassment and persecution of all Human Rights abuses.In particular, it said Rohingya women suffer at the hands of the government. Freedom House has reported mass military rapes of Rohingya women. Fearing for their lives, many of these women have fled the country to Bangladesh. According to UN Watch –anonprofit NGO – statedarecent session on women’s rights of the Forum on Minority Issues of the UN Human Rights Council.
The Burma Army continues to attack people in three townships of Ba Maw District, Kachin State: Mun Si Township, Shwegu Township and Ba Maw Township. On 16 December 2011, Burma Army soldiers killedawoman from Prang Kawng Village. The woman, 30-year-old Lamung Kaw Seng, suffered fromamental disability. As Burma Army troops approached the village, all the villagers fled except for Lamung Kaw Seng. When the soldiers found her, they killed her and threw her intoatoilet pit. Displaced Kachin children, 15 December 2011 Map showing area of report Local people have left their homes and moved to Internally Displaced Persons (IDP) camps near the international border because of the fighting, which continues to happen every day in this area. There are6IDPs camp along the border: Yang Lu Camp Law Hpai Camp Hka Dawng Pa Camp Nga Nawng Pa Camp Na Kawng Kawng Camp Lung Kawk Camp Displaced people at Yang Lu IDP Camp, 17 December 2011 Law Hpai IDP Camp, 17 December 2011 Na Kawng Kawng IDP Camp, 16 December 2011 There are 3,998 people in those6IDPs camps. They arrived at the border area between 27 and 28 November. There are 2,442 displaced people in3IDPs camps in Mun Si Township of Ba Maw District. 1) La Na Zup Camp 2) Dung Bung Camp 3) Manwing Camp Displaced family at La Na Zup IDP Camp, 15 December 2011 Dung Bung IDP Camp, 16 December 2011 There are 7,058 IDPs from 123 villages that left their homes in Ba Maw, Shwegu and Mun Si Townships. The Kachin Independence Army (KIA, pro-democracy ethnic resistance) and WPN,alocal Kachin humanitarian aid group, are taking care of these people by supplying food, medicine, warm clothes, and blankets, though the supplies are not enough to meet the needs. The most common illness for children under5years old is the common cold, and diarrhea is the most common illness for children above 5. Adults above 40 years old are especially suffering from high blood pressure. WPN is currently treating them. The children are not able to go to school. The Burma Army started their offensive in this area by entering from northern Shan State in October with 500 troops from Light Infantry Battalions (LIB) 504 and 506 under Division 66. Later on the Burma Army sent reinforcements from Divisions 33, 77 and 99, totaling 2,000 troops at present. Burma Army troops are torturing and killing villagers, burning houses and rice barns, and destroying or stealing villagers' belongings. The Burma Army has divided into4or5columns and is attacking the KIA using 60mm, 82mm and 120 mm mortars; M79 guns; 0.5-caliber machine guns and other small arms, and using helicopters for food supplies. Specifically in these townships, the Burma Army is not building new camps, but is occupying the KIA's Battalion 27 Camp after taking it over. Currently there is not heavy fighting but small clashes continue every day. A total of over 30,000 Kachin people have been displaced. CORRECTION TO PREVIOUS REPORT: In the recent report "Burma Army Continues Attacks in Kachin State as of 14 December 2011", the information in the first three paragraphs and the photo of the Burma Army mortar were collected by FBR teams on the ground in Kachin State. All information beginning with "On 8 October 2011," until the end is courtesy of Partners Relief and Development, compiled first-hand by Partners investigators. In the report only the photos had been credited to Partners. God bless you, The Free Burma Rangers’ (FBR) mission is to provide hope, help and love to internally displaced people inside Burma, regardless of ethnicity or religion. Usinganetwork of indigenous field teams, FBR reports on human rights abuses, casualties and the humanitarian needs of people who are under the oppression of the Burma Army. FBR provides medical, spiritual and educational resources for IDP communities as they struggle to survive Burmese military attacks. Credit here Read More
Philanthropist George Soros arrives in Burma ဂျော့ဆိုးရော့စ် မြန်မာပြည်ရောက်နေ
Chiang Mai (Mizzima) – George Soros, the founder of the Open Society Foundation, which works to promote democracy, human rights and freedom in the world, visited Inle Lake in Shan State on Wednesday. George Soros at the World Economic Forum in Davos, Switzerland in 2010. Photo: en.wikipedia.orgWin Myint, the Shan State minister for National Race Affairs, told Mizzima he confirmed the information with officials atahotel in Khaungtia village, where Soros is staying. On whether members of the Shan State government would meet Soros or not, Win Myint said, “We will meet with him only if he invites us.” He said the state government has not been told officials to meet with him or not to meet with him. Khaungtai village is seven miles from Nyaungshwe Township in Shan State. Soros, 81, arrived in Burma because he wanted to visit Inle Lake and Bagan, two locations where his foundation has made donations, sources said. He arrived by private plane on December 26. He will leave in early January,abusinessman told Mizzima. “On December 26 and 27, he was in Rangoon and today he went to Inle. His two sons accompanied him. I think it’s his family’s ‘vacation visit’,” he said. In 1993, Soros founded the U.S.-based Open Society Institute (OSI). Presently, OSI has branch offices in more than 70 countries in Europe, Asia, Africa and Latin America that promote human rights, education, health and freedom of press. OSI donates about US$2millionayear to promote democracy in Burma, according to the Forbes website.
According toa2007 cover story on the Forbes website, some 30 per cent of the foundation’s Burma Project money goes to education programs and university scholarships, the rest to grants for groups working on Burmese causes. Recipients included the Alternate Asean Network on Burma, which issues reports on Burma; the National Coalition Government of the Union of Burma, Burma's government-in-exile; and the Computer Network Training Program, which teaches computer skills in the refugee camps.
Capacity building and teaching English are priorities. David Mathieson, the Burma consultant for Human Rights Watch, has taught English to refugees in the camps and believes that English proficiency among the refugees is much greater than among the Thai population, according to the article.
Sometimes the Burma Project's support is more administrative than educational, as shown by its work with the National Coalition Government. Elected in 1990 but never installed, the shadow government resides in an office outside Washington, D.C. paid for by Soros. When it comes to policy, however, the project gives little advice, saidaspokesperson. Instead it listens to the ministers' needs and makes introductions if they want to create alliances.
______________________________________________________________________________________ ကိုဝိုင်း ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နိုင်ငံတကာတွင် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုအတွက် အကူအညီများ ပေးနေသည့် OSI ခေါ် Open Society Institute ကို စတင်ထူထောင်သူ ဂျော့ဆိုးရော့စ် George Soros သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အင်းလေးကန်သို့ အလည်အပတ်ရောက်နေသည်ဟု ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“သူတည်းတဲ့ ခေါင်တိုင် ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်က တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို သွားတွေ့ပြီး ကျနော် သိရတယ်” ဟု ဦးဝင်းမြင့်က ဆိုသည်။
ဂျော့ဆိုးရော့စ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံရန် ရှိမရှိကိုမူ “သူခေါ်မှပဲ ကျနော်တို့ သွားမယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကတော့ ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားသားနဲ့ တွေ့ဖို့မတွေ့ဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာ မရှိပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
ညောင်ရွှေမြို့နှင့် ၇ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် အင်းလေးကန်စပ်မှ ခေါင်တိုင်ကျေးရွာတွင် တည်းခိုနေ သည့် ဂျော့ဆိုးရော့စ်သည် အင်းလေးနှင့် ပုဂံဒေသသို့ အလည်အပတ် လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး လာမည့် လဆန်းတွင် ပြန်မည့် ဂျော့ဆိုးရော့စ်အား အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက တွေ့ဆုံရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်ကြီးတဦးကလည်း ပြောသည်။
“၂၆၊ ၂၇ က သူ ရန်ကုန်မှာရှိပြီး ဒီနေ့တော့ အင်းလေးသွားတယ်ပြောတယ်။ သူ့သားနှစ်ယောက်လည်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိသားစု ဒီမှာ vacation visit ပေါ့ဗျာ” ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက် OSI ကို ဂျော့ဆိုးရော့စ်က ၁၉၉၃ ခုတွင် ထူထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဥရောပ၊ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိကတို့ရှိ နိုင်ငံ ၇၀ ကျော်တွင် ရုံးခွဲများထားရှိပြီး လူ့အခွင့်အရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် စသည်တို့အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀၀ ကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ နှစ်သန်း သုံးစွဲလေ့ရှိသည်ဟု Zimbio နှင့် Forbes အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ရေးသားထားကြသည်။